African Tourism Board inopenya, kurwa, uye kugonesa kuGeneral Assembly
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board inopenya, kurwa, uye kugonesa kuGeneral Assembly
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Investments • nhau • vanhu • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
African Tourism Board Assembly endorsement yeUNWTO Secretary-General
Sachigaro weAfrican Tourism Board VaCuthbert Ncube nhasi vatsigira Her Excellence Mai Al Khalifa anobva kuBahrain pachinzvimbo cheMunyori-Mukuru we UNWTO.
Sarudzo dziri kuuya dzeUNWTO dzichaitirwa kuMadrid muvhiki kubva nhasi kubva muna Ndira 18.
Ncube akapfupikisa zvakaitwa nesangano iri muna2020 panguva yaipfuura panguva dzisingaite.
Patron Dr. Taleb Rifai anga achitungamira mukubatsira sangano kupinda muchikamu chitsva chekufambira mberi.
Vatungamiriri vezvekushanya vanosanganisira VP Alain St. Ange anobva kuSychelles, mukuru weKomisheni Dr. Walter Mzembi nevamwe vazhinji vakapinda musangano wakakosha wekutanga uyu.
Ncube naJuergen Steinmetz vanowana rubatsiro nevamwe vatungamiriri vatatu vakawedzerwa kusangano kuti vabatsire neyakagadziridzwa mamiriro eATB. Vatungamiriri vatsva vachamhan'ara kumusangano mukuru wechipiri uchadaidzwa musi waApril 2, 2021, kuti vasarudze timu yevatungamiriri zvachose.
COVID-19 inoramba iri dambudziko hombe uye kutyisidzira. Project Tariro, yakagadzwa naDr Taleb Rifai, Dr. Peter Tarlow, Dr. Walter Mzembi naAlain St. Ange nemakurukota ezvekushanya nevatungamiriri vepamusoro kubva kumativi ese eAfrica vacharamba vachirwisa muvengi uyu.